प्रताप दुलाल २१ भदौ शनिबार, २०७६	११:२६:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । विश्वको एउटा टप ब्र्राण्ड बाइक नेपाल भित्रियो । तर, सुरुवाती दिनमा नेपालमा यसको छवी खासै राम्रो भएन । यो ब्राण्डले विश्वमा पाएको सम्मान नेपालमा पाएन । त्यो ब्राण्ड थियो– रोयल इन्फिल्ड ।
एक दशकपछि नेपालमा रोयल इन्फिल्डले काँचुली फेरेको छ । अहिले नेपाली सडकमा सर्वाधिक इज्जतिलो बाइकमध्ये बनेको छ– रोयल इन्फिल्ड ।
विश्व चर्चित ब्राण्ड भए पनि नेपालमा पहिले छवी किन राम्रो भएन ? अनि, अहिले किन यो प्रतिष्ठित र सर्वाधिक रुचाइएको ब्राण्डमध्ये बन्यो ? यसको जवाफ दिने सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुन्– रुद्रजंग पाण्डे ।
सनराइज खबरसँग रुद्रजंगले अतित सम्झँदै भने– ‘म अटो सेक्टरमा लागेको करिब दस वर्ष भयो । रोयल इन्फिल्डबाट मैले करिअर सुरु गरें ।’
‘अति शानदार बाइक भए पनि सुरुवाती दिनमा गुण्डा इमेजका मानिसले मात्र चढ्थे’– रुद्रजंग भन्छन्– ‘बाइक किन्न आउँदा पनि शोरुमका कर्मचारीलाई ‘तँ’ भनेर बोलाउँथे । त्यस्ता मानिसले बाइक किन्थे ।’
धादिङका हुन् रुद्रजंग । उतै प्लस टु सकेर उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं भित्रिएका थिए । करिब एक दशक अघिको कुरा हो । भरखरै नेपालमा रोयल इन्फिल्ड भित्रिएको थियो । रुद्रजंग रोजगारको क्रममा यो ब्राण्डसँग गाँसिए ।
‘त्यसबेला र अहिलेमा रोयल इन्फिल्डको इज्जत आकाश पातालको फरक छ’– उनी भन्छन्– ‘अहिले सबै उमेर र वर्गको पहिलो रोजाई बनेको छ रोयल इन्फिल्ड ।’
रुद्रजंगले करिअर सुरु गर्दा रोयल इन्फिल्ड वर्षको दुई अढाई सय वटा मात्र बिक्थ्यो । अहिले ६ हजारभन्दा धेरै बिक्छ । अरु ब्राण्डभन्दा महंगो छ बाइक तैपनि यसले नेपाली सडकमा बेग्लै शान र परिचय स्थापित गरेको छ ।
खास किसिमका युवाले मात्र चढ्ने रोयल इन्फिल्ड अहिले बैंकर, पत्रकार, साहित्यकार, सरकारी अधिकृत सबैले चढ्छन् । अनि, सबै उमेरकाले पनि चढ्छन् ।
रोयल इन्फिल्डले सबै उमेर र वर्गको मन जित्न कसरी सम्भव भयो ? रुद्रजंग भन्छन्– ‘तथ्यांक हेरे हुन्छ, रोयल इन्फिल्डको दुर्घटना दर अत्यन्तै थोरै छ, विरलै दुर्घटना भएको छ ।’
उनी यो पनि थप्छन्– ‘रोयल इन्फिल्डको अर्काे नाम सुरक्षा हो । यो अत्यन्तै सुरक्षित बाइक हो । त्यसैले ग्राहक आकर्षित भए ।’
रोयल इन्फिल्डको सुरक्षाको आयाम ठूलो छ । रुद्रजंग सोध्छन्– ‘तपाईंले अरु बाइक हराएको सुन्नुभएको छ तर रोयल इन्फिल्ड हराएको सुन्नुभएको छ ?’
नेपाली बजारमा रोयल इन्फिल्डको शाख र इज्जत बढ्दै गयो । यसले विश्वशनीयता कमाउँदै गयो । उता, रुद्रजंगले पनि उन्नति गर्दै गए । रोयल इन्फिल्डमा साधारण पदबाट करिअर सुरु गरेका रुद्रजंग अहिले सेल्स मेनेजर छन् ।
रुद्रजंग आफैं पनि रोयल इन्फिल्ड चढ्छन् । भन्छन्– ‘यो बाइक बेच्ने काम मात्र गर्दिन, रोयल इन्फिल्डको फ्यान हूँ म ।’
रुद्रजंगको रोयल इन्फिल्डसँग गाँसिएको करिब १० वर्षको अवधीमा रोयल इन्फिल्डले विश्व बजारमा बुलेट बाइक सिरिजमा हार्ले डेभिड्सन्लाई उछिनेको छ । वेलायती हो रोयल इन्फिल्ड । तर, आज भारतमा पनि यसको कारखाना खुलेको छ जहाँबाट विश्वस्तरीय बाइक उत्पादन भइरहेछ ।
अब रेसिङ बाइक पनि नेपालमा ल्याउँदैछ रोयल इन्फिल्डले । नेपालसँग गहिरो नाता गाँसिरहेको छ यसले ।
नेपालसँग रोयल इन्फिल्डको पछिल्लो नाता गर्वलायक छ । रुद्रजंग उत्साहित हुँदै भन्छन् – ‘रोयल इन्फिल्ड मर्मत गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने देश बनेको छ, नेपाल ।’
रोयल इनफिल्डको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ट्रेनिङ सेन्टर नेपालमा खुलेको छ ।